Dowlada Soomaaliya oo ansixisay heshiis ay la gashay dowlada Norway. - NorSom News
Golaha Wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya oo shaley shir aan caadi aheyn Muqdisho ku yeeshay ayaa ansixiyey oggolaanshaha heshiiska ay Norway ku caawineyso deyn-cafinta Soomaaliya.
Dowladda Norway ayaa bixineysa lacag gaareysa $400 Milyan oo ah qaanta Bangiga Adduunku ku leeyahay Soomaaliya. Norway ayaa sheegtay inay talaabadan u qaadeyso, si loo helo xasilooni maaliyadeed iyo mid siyaasadeed oo ay hesho Soomaaliya.
Previous articleFrp oo taageerayaal badan helay, kadib markii ay xukuumada ka baxeen.
Next articleJuba Travel: Waxaan bilaga Nov iyo Disember sameynay qiimo-dhimis 10% tigidka, meel walba oo caalamka ah.